galmudugnews.com » Raysul wasaaraha oo la kulmay haween Soomaaliyeed+Sawiro
Home » WARARKA » Raysul wasaaraha oo la kulmay haween Soomaaliyeed+Sawiro Raysul wasaaraha oo la kulmay haween Soomaaliyeed+Sawiro galmudug on
No Comment Views 16233Raysul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabduqaadir Faarax Shirdoon ayaa maanta xafiiskiisa magaalada Muqdisho kula kulmay qaar ka tirsan haweenka Soomaaliyeed oo ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah.
Cabdi Xaaji Goobdoon oo kulanka ka qeyb galay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in raysul wasaaraha uu kala hadlay haweenka kaalinta ay ku leeyihiin arrimaha siyaasadda dalka, dhaqaalaha iyo bulshada, iyo in la xoojiyo dowrka haweenka ee nabadda.
Goobdoon ayaa xusay in ay dumarka u soo jeediyeen raysul wasaaraha in la kordhiyo daryeelka haweenka iyo carruurta, il-gaar ahna lagu eego noloshooda.
Raysul wasaaraha ayaa u ballan-qaaday haweenka in la ilaalin doono xuquuqdooda, wada-shaqeyn dhow ahna la yeelan doonto xukuumadda.
Waa kulankii ugu horreeyay ee raysul wasaaraha Soomaaliya uu la qaato haweenka tan iyo markii la magacaabay horraantii bishan.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21020 hitsContact US - 19681 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15783 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15424 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13962 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13916 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13832 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13700 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11830 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11803 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11745 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11538 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11510 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11367 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11249 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11173 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11085 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11065 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10854 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10485 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10360 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10354 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 10048 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10035 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9794 hits Home About